xaalada Garoonka Muqdisho oo kacsan kadib Madaafiic lagu garaacay Garoonka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii xaalada Garoonka Muqdisho oo kacsan kadib Madaafiic lagu garaacay Garoonka
Waxaa hakad ku yimid shaqadii ka socotay Garoonka Muqdisho, kadib madaafiic ku dhacday garoonka diyaaradaha iyadoo mid ka mid ah madaafiicdana uu ku dhacday afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho.
Lama oga qasaaraha ka dhashay Madaafiicdaasi Balse waxaa istaagay Duulimaadyadii saakay ka soo dagi lahaa Garoonka Muqdisho.
Sida ay muujinayaan muuqaalo laga soo duubay garoonka waxaa la arkayaa qiic ka baxayo qeybo kamid ah Garoonka Diyaaradaha.
Sidoo kale Madfaca ku dhacay Garoonka Aadan Cadde ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda ay weerar kuso qaadeen banaanbaxayaal ay hoggaminayeen musharixiinta xilka madaxweynimo ee Soomaaliya.
Previous articleMaqaayad ku taala Garoonka Muqdisho oo Rasaas qabsatay gubanaysa
Next articleXasan Cali Kheyre “ Waxaan aniga iyo dhowr musharax oo u taagan xilka Madaxweynaha, Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka, masuuliyiin kale iyo shacab badan ka badbaadnay isku dey dil
Waxaa dhaqan galay heshiis xabbad joojin ah oo ay wada gaareen Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ah ee Xamaas ee ku sugan Marinta Qasa. Waxaa sidaas...
Madaxweyaha Somaliland oo xafiiskiisa ku qaabiley wefdi ka socday dalka...